Ibhulogi yase-Dubai, iNgcaciso eSebenzayo, izikhokelo, Ukuhlala kunye nokusebenza e-UAE
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Novemba 4, 2019
ISUMMER 2020 YAYE YAYE KUthengiswa
INDAWO YOKUXELWA KWISIXEKO SASEKRIVI Berek yidolophu encinci, enabantu abaphantse babe yi-7,000. Esi sixeko simi kwithafa elikhulu kumazantsi oLwandle lweMeditera malunga ne-30 km kwimpuma yedolophu enkulu yaseTurkey Riviera - iAntalya. Isimo sezulu esivumayo sithetha ukuba iihotele eBeleki zivulekile unyaka wonke. Abakhenkethi abavela kwihlabathi lonke beza apha besixinene kwiinyanga ezishushu nezitshisayo zehlobo. Bayixabisa imigangatho ephezulu yeehotele zalapha kunye neelwandle ezintle. Kwiinyanga zobusika, uBelek utsala umdla wabadlali kwigalufa ngenxa yamabala alungiselelwe kakhulu ukwenza lo mdlalo, iiklabhu zebhola nazo ziza apha kwiinkampu zoqeqesho zasebusika, njengoko iihotele ezininzi zinobukhulu obugqibeleleyo kunye neendawo zebhola. Ihotele zibekwe phakathi kwamahlathi apayini, Imozulu intle [...]
Esi siqithi yiparadesi esempuma yeparadesi Madeira
Esi siqithi yiparadesi esempuma yeparadesi Madeira. Ndiyabulela kwiqondo lokushisa lemini elihlala lihleli-lijikeleze i-24 ° C - ibizwa ngokuba ngumhlaba wentwasahlobo kanaphakade kwaye inomdla kubakhenkethi unyaka wonke. Iintyatyambo ezimibalabala, iintyatyambo eziluhlaza, imihlaba eyahlukeneyo enamagqabi aphefumulayo kunye neengcango ezinemifanekiso emihle apha. Isiqithi somlingo sise-500 km ukusuka kunxweme lwaseAfrika kunye ne-1000 km ukusuka eYurophu. Umkhwa ukuxelela ukuba uthethe malunga nesiqithi saseMadeira, kodwa eneneni sisona siqithi-kukho iziqithi ezininzi. Ngaphandle kweMedira, enkulu yezona ziqithi yiPorto Santo (malunga ne-40 km ukusuka eMadeira) enonxweme oluhle. Ezi ziqithi ziquka amaqela amabini eziqithi ezincinci: Ilhas Desertas kunye neIlhas Selvagens. Ezokhenketho, kunye nemveliso ye wayini ye Madeira kunye nezityalo ezime kakuhle, zezona ziphambili [...]
Ubuhle obuthandekayo beGrisi yamandulo
Ubuhle obuthandekayo beGrisi yamandulo eyenzelwe esi siqithi sincinci benza indawo elungileyo yokuphumla kude neendawo ezinokhenketho. Ibekwe kufutshane neCephalonia. Ungafika ngesikhephe ukusuka kwisixeko saseKefalonia eFiskárdo, ekumantla esiqithi. Esi siqithi sincinci, esihlala kuphela i-96 km², siphefumla uxolo nokuzola. Imbonakalo yeentaba, ineebuhlanti yeyona mifanekiso mihle. Abemi besi siqithi bajongana nezolimo, umnquma kunye nomdiliya okhulayo, kunye nokwalusa. Isiqithi esidumileyo saseOdysseus, ebisisimbombo esibalulekileyo sokubhalwa kweenkulungwane, sisiseko esingachazwanga seGrisi. I-Itaka ineendawo ezingaselunxwemeni ngaselunxwemeni, imifanekiso emihle engqongwe ziintaba ezinombala ovela kwiintyatyambo ezifumileyo kunye namanzi acwebezelayo acwengileyo acwengileyo eIonia. Imozulu engeyiyo yezorhwebo yesiqithi nayo iyadalwa [...]
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Novemba 3, 2019
Iingcebiso zokuHamba, eOstriya, eSpain
Iingcebiso zokuHamba iinyani ezinomdla kunye nenomdla wabakhenkethi iindawo ezizodwa zesicelo somtshato phesheya Isiphakamiso siwumzuzu obaluleke kakhulu kubomi babathandi. Ukuze ngalo mzuzu kuvakale nangakumbi, kufanelekile ukujongana nayo kwindawo engaqhelekanga nenqabileyo. Isisombululo esifanelekileyo luhambo lokuthandana kumazwe aphesheya. Okokuqala, nangona kunjalo, kufuneka ufike apho, enokunceda i-arhente yokuhamba yeGryf. Yonke enye into ixhomekeke kuthi kuphela, kuba eYurophu kukho inani elikhulu leendawo ezimangalisayo apho ukuzibandakanya kuya kujonga phantse kufilimu. I-Paris-isixeko sabathandi Akukho ndawo yongxowankulu wedolophu yothando kuneParis. Ke, isiphakamiso kwesi sixeko esimangalisayo siya kuba yinto engaqhelekanga. I-Louvre, i-Eiffel tower, i-Arc de Triomphe, i-Notre-Dame Cathedral - kuyo yonke indawo, isindululo siya kuba nomtsalane waso. Ukwengeza, [...]
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Novemba 2, 2019
Ngenye imini I-Blog yokuhamba
Usuku olunye lokuma-iBlog yokuHamba Ungayikhusela njani imithwalo ekuhambeni? Akukho nto inokwenzeka ukuba yonakalise imvakalelo yakho ngexesha lokuhamba kunempahla eyonakeleyo okanye ebiweyo. Izixhobo ze-elektroniki ezixabiso likhulu, iimpahla ezikwimfashini okanye izinto zokuthambisa zeempawu ezaziwayo zinokuthengwa kwakhona, nangona oku kunxulunyaniswa neenkcitho ezingaphezulu, kodwa izinto zibonakala zisiba mbi kakhulu ngezinto ezinexabiso elibonakalayo kuthi. Iifoto ezilahlekileyo ngokungakhathali, izikhumbuzo zokuhamba kweholide okanye ezinye izinto ezibonakala zingenaxabiso zihlala zihamba nomsindo kunye nosizi olukhulu. Kuthekani ukuba sahluthwa amayeza kunye namaxwebhu esiwafunayo? Le yintlekele yokwenene. Isaci esidala nesilumkileyo sithi ukuthintela kungcono kunokunyanga. Ke sicebisa ngendlela onokuthi uwukhusele ngempumelelo umthwalo wakho ekuhambeni. Ukukhusela isutikheyisi kumonakalo Ungathatha isigqibo sokuba umthwalo wakho uyakufikelela [...]
Ukuhamba ezimbini-ukuchitha usuku lukaValentine?
Umthendeleko wabathandi usondela ngokukhawuleza, ke lixesha lokucinga ngendlela yokucwangcisa ixesha elikhethekileyo lokuqinisa ngakumbi imvakalelo yokudibanisa abantu ababini abethwe ngutolo lweC Cupid. Umbuzo wokuba ungaya phi ngoSuku lweValentine ukuze ube nento oyikhumbulayo kwiminyaka ezayo, nangona kunjalo, ungalali kubantu abaninzi abatshatileyo. Uhambo lokuthandana wedwa kunye nomntu wakho omthandayo ukuya kwiidolophu ezintle zaseYurophu kubonakala ngathi yinto efanelekileyo. Ngaba awazi ukuba yintoni kanye kanye ekufuneka ugqibe kuyo? Fumanisa izimvo zethu ngohambo olunomdla lweveki! Abantu ababini - inkanuko enye Ukuba wabelana ngokuthandana okuqhelekileyo, okuyiyo inkcubeko kunye nobugcisa, ke eyona ndlela yokuqinisa ubudlelwane phakathi kwakho iya kuba luhambo oluya eVienna. Idolophu enkulu yaseOstriya izele bubomi unyaka wonke [...]
Uyipakisha njani uhambo
Indlela yokupakisha yokuthatha uhambo, ukungayeki nantoni na - oko kukuthi, amaqhinga okupakisha ipakethi yakho Ukupakishwa ngokufanelekileyo kwesutikheyisi yokuhamba kuchaphazela zombini ukonwaba kohambo lwethu kunye nemeko yemicimbi esiphethe ngayo. Umhambi olungiselelwe kakuhle unaye ukukhanya, izandla kunye nemithwalo emincinci ekwaziyo ukuhlalisa zonke izinto eziyimfuneko. Apha ngezantsi kukho amaqhinga okupakisha ipakethi yakho ngendlela yokuba unganikezeli kwanto. Uyipakisha njani ipakethi ukuze ilingane nayo yonke into ekuyo? Ngaphambi kokupakisha, kufuneka sikhethe ityesi efanelekileyo eya kulungela uhambo lwethu. Nangona kunjalo, umthwalo olungiselelwe ukuphumla esixekweni ujongeka ngokwahlukileyo kunexesha elisetyenziswe ngokukuko. Ukupakisha ngokufanelekileyo ipakethi yakho, kufuneka senze uluhlu lwezinto eziyimfuneko. It [...]
Sincomela ixesha le-ski apho ungahamba khona
Sincoma ixesha lokuhamba nge-ski apho ungahamba khona Ukusika ikhephu lokuqala kunye nohambo lwe-ski ngamanye amaxesha luqale phakathi kuNovemba, ngokwemvelo hayi ePoland. Nangona kunjalo, iziseko zophuhliso zasePoland kunye namathuba emidlalo yasebusika ahlala ephucuka, ngaba indalo iyanceda okanye ayisebenzi? nekhephu. Uninzi lukhetha ukuhamba uhambo lokuya ngaselwandle ngenxa yokuba sineemeko ezilungileyo zemozulu, ukhetho olubanzi lokuhamba ski kunye noluhlu olukhulu lwendawo yokuhlala. Nazi ezinye zeengcebiso zethu kubo bonke abafuna iparadesi ye-ski-sicebisa ukuba ungaya phi xa ufuna ukuya ekhefini ukuba ubeneholide entle ebusika! I-Austria for skiers Iseyona ndlela ikhethiweyo ekhethiwe yokuhamba ski. Ukukhutshwa okukhulu kweendawo ezinentaba, uninzi lweendawo zokukhenketha ezizaliswe ziindawo zokuchithela i-ski, ngaphezulu kwe-4,000 ziphakamisa nge-20,000 yeekhilomitha zizonke! Ezi datha zinomdla, ngakumbi ukuba [...]